LG gosipụtara OLED TV nke anụ ọhịa 65 | Akụkọ akụrụngwa
Firmlọ ọrụ Asia na-aga n'ihu na-eji ụbọchị eme ihe na mmalite nke CES, ọzọkwa, ọ bụghị ihe ijuanya na ngosi nke TV ọhụrụ. Beforebọchị gara aga, LG gosipụtara TV nke mbụ 88, yana mkpebi 8k na teknụzụ OLED. Ọ na-ọkọnọ a projector na 4k mkpebi na 150 sentimita asatọ. Ugbu a ọ bụ oge telivishọn na-apụta n'onwe ya, telivishọn nke nwere sentimita 65 n'ogo, dakọtara na mkpebi 4k yana kwa na-ejikọ usoro ụda, ndị ọkà okwu, na ihuenyo, na-eme otu n'ime usoro emelitere nke Crystal Sound Tech sistemụ, nke ndị Japan Sony jiriburu ụfọdụ n'ime ụdị OLED ya.
Teknụzụ teknụzụ Crystal Sound nke LG ji arụ ọrụ bụ ọkwa dị ugbu a, mbupute 3.1, karịa nke Sony jiri ruo ugbu a, nsonye 2.1, ọ na-enye ohere ọ bụghị naanị ịgụnye usoro ọdịyo na telivishọn, kamakwa na-enye anyị ohere iji ya na ihuenyo LCD, maka ndị nlele desktọọpụ na ọbụnadị maka laptọọpụ nke mere na ndị na-ekwu okwu site ugbu a gaa n'ihu bụrụ ihe onye nchịkọta, ma ọ dịkarịa ala ụdị ngwaahịa a.
Afọ anọ gara aga, LG webatara ihuenyo 18-inch nke nwere OLED teknụzụ nwere ike ịpịgharị onwe ya dịka akwụkwọ akụkọ ma kwe nkwa na ụdị n'ọdịnihu ga-enye anyị nnukwu. Ekwughi ekwu bụ emeghị eme. N'oge a, ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị n'ihe ngosi niile LG na-eme e gosiputaghi ego a, n'ihi ya, anyị ga-elegide anya na CES, ma chere ka ụlọ ọrụ ahụ mee ngosipụta ngosipụta nke ụlọ ọrụ ntụrụndụ ọhụrụ a nke nwere ike ifu akụrụ na akụkụ nke ọzọ.
Ugbu a, anyị ga-ahụ otu ụlọ ọrụ Korea LG gbalịa imejuputa teknụzụ a na ngwaọrụ mkpanaka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » LG na-enye OLED TV nke 65-inch